आज ३४ औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस | Mechikali Daily
आज ३४ औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
Posted By: Mechi Kalion: २ चैत्र २०७३, बुधबार ०७:३१
म बुटवलमा लाग्ने साप्ताहिक हाटबजारमा जाने गर्छु । त्यहाँ तरकारी, उपभोग्य सामग्रीहरु किन्दा हाम्रा चेलीबेटीहरुको मालसामान किन्ने प्रकृति देखेर दःुख लाग्छ । वास्तवमा मालसाामन किन्नु पनि एक कला हो । यस कलाको ज्ञान नहुँदा बजारमा हाम्रा दिदीबैनीहरु, चेलीबेटीहरु, दाजुभाईहरु ठगिएको देख्खा दुःख लाग्छ ।
उहाँहरुले तरकारीको भाउ सोध्नुहुन्छ । पसलेले भाउ पाउँमा बताउँछ । मानिलिऊँ सिमिको भाउ रु. २० प्रति पाउँ पसलेले भन्छ भने क्रेताले किलोका भाउँ जान्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हाम्रा क्रेताहरुले पाउँको दरभाउ मै किलो र आधा किलो किन्नु हुन्छ । यस्ता व्यापारमा मोलतोल गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यस्तो मोलतोल क्रेताहरुबाट हुने गरेको पाइन्न । २० रुपैयाँ पाउँको सिमिको ८० किलो पर्छ । तर, त्यही सिमि किलो किन्ने हो भने रु. ६० मा सजिलै पाइज्छ । तर हाम्रा विशेष गरेर चेलीबेटीहरुले मोलतोल नै नगरी ६० मा पाइने सिमिलाई रु. ८० तिरेर किन्नु हुन्छ । अर्को पक्ष के छ भने उपभोग्य सामानहरु किने पछि बिल माग्ने चलन पनि छैन । कथम्कदाचित उचित मूल्य तिरेर भोली कमसल प्रकृतिको मालसामान पर्यो भने सोको साटो क्षतिपूर्ति पाउन अथवा सट्टा पट्टा गर्न केही त प्रमाण हुनुपर्छ त्यो प्रमाण भनेको बिल हो ।
तसर्थ सकेसम्म क्रेताहरुले मालसामानहरु किनेपछि बिल अनिवार्य रुपामा माग्नु पर्छ, लिनुपर्छ । बिलमा बस्तुको तौल, परिमाण, मूल्य, गुणस्तर आदि लेखिएको हुन्छ भने भ्याट, कर तिर्नुपर्ने मालसामान रहेछ भने व्यापारीहरुले बिल काट्दा भ्याट कर लेख्नु पर्छ । लेखिसकेपछि अनिवार्य रुपले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिल नकाटेपछि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हँुदैन । यसरी कर छल्न पाइन्छ भने पछि आफ्नो खुशीले कर तिर्नेगरी बिल काट्न पाइन्छ । तसर्थ सचेत र जागरुक उपभोक्ताले जहिले पनि सरसामान किनिसकेपछि र सेवाको उपभोग गरेपछि बिल लिने, बिल माग्ने बानी विकसित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रमाणले पछि क्षतिपूर्ति पाउन अथवा साटफेर गर्न कानूनी आधार प्रदान गर्दछ । यो उपभोक्ताहरुको हक र अधिकार सुनिश्चित पार्ने एक काइदा हो ।
सन् १९८५ को अप्रिल महिनामा संयुक्त राष्ट संघले उपभोक्तहरुको हकहित र अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्न एउटा अनुबन्ध पारित गरेको थियो । त्यसैको आधारमा प्रत्येक वर्षको मार्चको १५ तारिखका दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् २०१७ को मार्च १५ का दिन सारा संसारले ३४ औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइरहेको छ । उपभोग गरेको मालसामान अथवा सेवाहरुको निस्सा वा प्रमाण भएन भने पछि क्षतिपूर्तिको दावा पेश गर्न कठिनाइ पर्ने हुन्छ । तसर्थ सचेत र जागरुक उपभोक्ता बनौं र बिल लिने दिने बानी बसालौं । हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ ले बमोजिम उपभोक्ताहरुको हकहित संरक्षण गर्ने प्रयोजन निमित्त प्रत्येक उपभोक्ताहरुलाई देहाय बमोजिमको हक र अधिकारहरु प्राप्त हुनेछन् ः
क) जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिहरुमा हानी पुर्याउने उपभोग्य वस्तुहरु तथा सेवाहरुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार ।
ख) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरुबाट सुरक्षित हुनको निम्ति उपभोग्य वस्तुहरु तथा सेवाहरुको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता आदिबारे सुसुचित हुन पाउने अधिकार ।
ग) यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तुहरु तथा सेवाहरुको छनोट गर्न पाउने अवसरहरुमा विश्वस्त हुन पाउने अधिकार ।
घ) उपभोक्तहरुको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाई हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन पाउने अधिकार ।
ङ) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरुबाट उपभोक्तारुमा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूृिर्त पाउने अधिकार ।
च) उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार ।
यसरी कानूनी रुपले उपभोक्ताहरुको हकहित र अधिकारहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने सत्प्रयासहरु सरकारद्धारा भएको छ भने निजी क्षेत्रहरुका संघ÷संस्थाहरुबाट उपभोक्तामञ्च, नेपाल, जनहित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता संघ, नेपाल, नेपाल राष्टिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता महिला तथा बालबालिदका संरक्षण समुह र लोकतान्त्रिक उपभोक्ता मञ्च नेपाल जस्ता थुप्रै संस्थाहरु नेपालमा स्थापित भएर उपभोक्ताहरुको हकहित र अधिकारहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न लागि परेको नेपालमा पाइन्छ । तर, विडम्बना के छ भने नेपालमा दुरदर्शी, श्रृजनशील, त्रुटिरहित, मितव्ययी, पारदर्शी किसिमले समष्टिको सर्वोत्तम हित हुने प्रकृतिको योजनाहरु तथा कार्यक्रमहरु बन्न सक्ला बजारमा उत्पादनकर्ता कृषकहरु र उपभोग्य पदार्थरुको उपभोक्तावर्गहरु दुवै बिचौलियाहरुको उत्पीडन दमन, शोषण्ढामा परेर उन्मुक्तिका लागि छटपटाई रहेको पाइन्छ ।
बिचौलियाहरु मुक्तः रहेको, उत्पादनकर्ता कसषकहरु र उपभोक्ताहरु उपस्थित रहेको बिक्रेता–क्रेता मात्र भएको) बजारको परिकल्पना गरिएको छ । यसको लागि सरकारले कुनै भुक्षेत्र विशेष अथवा समय शिवशेष को निर्धारण गरेर बिचौलिया रहितको बजार तोकि दिनुपर्ने भएको छ जहाँ बिक्रेता उत्पादनकर्ता कृषकहरु र क्रेतामा सोझै उपभोक्तहरु मात्र उपस्थित भएर खरिद बिक्री सुसम्पन्न गर्न सकुन् । खुला बजार प्रणाली अन्तर्गत माग र आपुर्तिको आधारमा स्वतः मुल्य निर्धारण प्रकृया पन्छाई सरकारले उत्पादनकर्ता कृषकहरुको पाउनुपर्ने बिक्री मुल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने जायज अधिकतम मुल्य सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने देख्तछु । अहिले बिचौलियाहरुले आफु खुशी खरिद र बिक्री मुल्य तोक्दा क्रेता र बिक्रेता दुवै मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यस प्रणालीबाट मात्र समष्टिको सर्वोत्कृष्ट हित हुने देखिन्छ । अराजक बजारलाई व्यवस्थित र अनुशासित पार्न कृत्रिम अभाव श्रृजना गरी कालोबजारी हुन नदिन सरकारको सम्बन्धित निकायले बरोबर बजारका पसलहरुको अनुगमन र निरीक्षण गरी राख्नु पर्छ । ढक, तराजु ठिक भए नभएको मुल्य सूची राख्ने गरेको नगरेको, क्रेताहरुलाई बिल दिने न दिने गरेको समय समयमा हेरिनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ज्यादै पुरानो भयो यसमा समय सामयिक सुधारहरु गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ भनी अनुभवी विज्ञहरु बताउँछन् ।
निरीक्षण अथवा अनुमगन गर्ने व्यक्ति अथवा निकायले निरीक्षण अनुगमन गर्दा स्थलगत रुपमै दण्ड दिने नियम नहुँदा बजारमा निरीक्षण तथा अनुगमनको खासै प्रभाव नपरेको अनुभवी तथा विज्ञहरु बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार सजाय हुने कसुर सम्बन्धि मुद्दाको तहकिकात निरिक्षण अधिकृतले गर्ने र तहकिकातको काम पुरा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालताम मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्ता मुद्दाहरुमा निरीक्षण अधिकृत तोक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । निरीक्षण अधिकृतले यस्ता मुद्दाहरुमा सरकारी वकिलको राय लिन सक्ने छन् । यस्ता मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलबाट हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो ऐनले ऐन विपरित काम, कारवाही गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर बडिमा चौदह वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँ सम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यस प्रकृयामा समय बढि लाग्ने र न्यायधिशहरुले मात्र निर्णय गर्न पाउने भएकोले बजारमा खासै प्रभाव नपरेको भनाई अनुभवी विज्ञहरुको छ । अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने अधिकृतलाई स्थलगत निरीक्षणकै बेलामा तुरुन्तै आर्थिक दण्ड दिने कानुनी व्यवस्था भएमा (टाफिक प्रहरीहरुलाई झै) यसबाट सरकारलाई केहि राजस्व पनि प्राप्त हुने र बजारमा यस्को अनुकुल प्रभाव पर्ने अनुभवी विज्ञहरु बताउँछन् । स्थलगत फैसलाको जानकारी तुरुन्तातुरुन्ती हुने भएकोले बजारमा यस्को प्रभाव तुरुन्त पर्छ तसर्थ तुरुन्तातुरुन्ती नगद जुर्मानाको (एक लाख सम्मको जरिवाना गर्न पाउने) कानुनी प्रावधान गरिने पर्ने देखिन्छ । अदालतको प्रकृया लम्बेतान र गुपचुप प्रकृतिले फ्रसला हुने भएकोले बजारमा खासै प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको हुन सक्छ । तर, स्थलगत जरिवाना तिर्ने कानुनी प्रावधानले बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले यसो हुनु सामयिक देखिन्छ ।